Canada Myanmar: May 2009
ဒါတွေ လုပ်ဖို့ လို ပြီ
( ၁ ) ပြည်ပြရောက် စိတ်တူသူ ရဲဘော်ဟောင်းတွေ အဲဒီ တိုက်ပွဲပုံသန်တန် ၂မျိုးစလုံးနဲ့ ဖြတ်သန်းဘူးသူတွေ
နည်းစပ်ရာ တွေနည်းမျိုးစုံနဲ့ ပြန်လည်စုစည်းဖို့ လိုတယ် စည်းလုံးဖို့ ပြောတာမဟုတ်ဘူး မလွယ်ဘူး ဘာ
လို့ အဲဒါအရင်လာရလဲဆိုရင်အင်အားအဓီကဟာပြည်တွင်းမှာရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ပြည်သူဆိုတာ ဘယ်တော့ မှ
တော်လှန်သူတွေရဲ့ အရှေ့ ကမထွက်ဘူး
( ၂ ) မိမိယုံကြည်ရာ နည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ ပြည်တွင်းမှာ လှပ်ရှားနေသူတွေကို ပြည်ပ က အဲဒီ တူညီ တဲ့ နည်း
လမ်းတွေနဲ့ လှုပ်ရှားနေသူတွေက တူရာ နည်းစပ်ရာ တွေစုပြီး ငွေအား ၊ အကြံညဏ်အား ၊ အခြား ဘာညာသာ
တကာ တွေ အထိ မိမိယုံကြည်ရင် ယုံ ကြည်သလို ထောက်ပံဖို့ လိုတယ် အမိန့် ပေးတာချည်းပဲ ၊ အကြံပေးတာ
ချည်းပဲ တော့ ဘယ်သူမှလိုက်မှာမဟုတ်ဘူး ရေရှည် လိုက်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး ၊ စိတ်ဓါတ်ရေးရာကအစ ထောက်
ပံ့ရေးတွေလိုတယ် မြန်မာပြည် ကို မြန်မာပဲ ကယ်တင်နိုင်မယ် နှစ်၂၀ လောက် အနည်းဆုံး ပြည်ပရောက်နေ
တဲ့ ကျုပ်တို့ တွေ တဦးခြင်း အတိုင်းအတာတခုအထိတော့ ပြန်လုပ်ပေးနိုင်သင့် တယ် ၊ အခြား ဘာညာ သရကာ
မလိုအပ်တာတွေကို လျှော့ ကြပြီး အဲဒီ ငွေတွေကို နည်းစပ်ရာ ၊ ယုံကြည်ရာ လမ်းကြောင်းတွေကတဆင့် ပြည်
တွင်းထဲကို ပို့ ကြပါ ဘာမှ ရှေရှေ ဝေးဝေး မတွေးပါနဲ့ ကျွန်တော်တို့ လည်း အခြားသူတွေ ပို့ ခဲ့ တဲ့ ငွေတွေ ကို
နယ်စပ်မှာ သုံးခဲ့ ကြပြီးပြီ ပဲ ..
( ၃ ) မိမိ ရောက်ရှိရာ နိုင်ငံ ၊ မြို့ တွေ မှာ ရှိ တဲ့ နည်း စပ် ရာသာမန် မြန်မာ ပြည်သူတွေကို စည်းယုံးကြပါ ပြည်
တွင်းထဲ က သန်း ၅၀ ကို ခေတ္တထား ပြည်ပ နိုင်ငံက မိမိ ဖုန်းတခေါ် ၊ တမြို့ ထဲနေကြတဲ့မြန်မာပြည်ပြောင်းလွဲ
ရေးကို စိတ်မပါသွားကြတော့ တဲ့ ၊ သို့ မဟုတ် အစထဲ က စိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိတဲ့မြန်မာပြည်ဖွားတွေကို ချည်း
ကပ်စည်းယုံးပါ စည်းယုံးရေးကို မိမိ မျက်စေ့ ရှေ့ က စတင်ပါ ..
( ၄ ) တော်လှန်ရေးကို မိမိ ရောက်ရှိရာနေရာ မှ စတင် တာဝန်ယူပါ ၊ သံရုံးဝန်ထမ်းတွေ သံအမတ်တွေ ရုံးမတက်
နိုင်အောင် သူတို့ အိမ်ရှေ့ မှာ လမ်းပိတ်ဆန္ဒပြကြပါ ၊ ၄င်းတို့ ရဲ သားသမ္မီးတွေ ဆွေမျိုးတွေနဲ့ နည်းစပ်အောင်ကြိုး
စားပါ ၊ သံအမတ် အိမ်က အိမ်ဖေါ်တွေ အလုပ်သမားတွေ ( နည်းဆုံး ၂ ယောက်ရှိ ) ကို ရအောင်ဆက်သွယ်ပြီး
နိုင်ငံရေး ခိုလှုံ ခွင့် လျှောက်ပေးပါ ၊ သူတို့ ရဲ ဖိနိပ်ခံနေရမှူတွေ ကို မိဒီယူတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး ဖေါ်ထုတ်ပေးပါ ၊
မြန်မာပြည်ကို မပြန်အောင် ဆွဲဆောင်စည်းယုံးပါ လုပ်ပေးပါ ။
( ၅ ) မြန်မာ့ တော်လှန်ရေး ကမ္ဘာမှာ ဘာကြောင့် အခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ စာရင် မှေးမိန်နေလည်း အဖြေရှာပါ ၊ ငါတို့ 
လူုမျိုးတွေ ဘာကြောင့် အခြားလူမျိုးတွေလောက် သွေး မရဲ တာလဲ့ ၊ ဒါမှမဟုတ် အခြားနိုင်ငံတွေလို ပြည်တွင်း
မှာ လက်နှက် တွေ မရှိနိုင်ကြလို့ လား စသည်တို့ ကို သုံးသပ်ပါ လိုအပ်သလို တော်လှန်ရေး ပုံသန်တန်တွေကို
( ၆ ) ဟိုအဖွဲ့ဒီ အဖွဲ့ဟိုလူကြီး ဒီလူကြီးတွေကို ဝေဖန်နေမဲ့ အစား မိမိနင့် အမြင်မတူ သော်လည်း ဦးတည်ချက်
တူလျှင် ဆက်သွယ်မှူများတိုးမျှင့် ကြပြီး အပြန်အလှန် သင်ယူကြပါ ဖလှည်ကြပါ ၊ သို့ သော် မိမိ ယုံကြည်ရာ
နည်းစပ် ရာ သင့် တော်ရာ လမ်းကြောင်းမှ တဆင့်အုပ်စု ငယ် ပျောက်ကြားတော်လှန်ရေး ပုံသန်တန်ကိုသာ
( ၇ ) ပြည်တွင်းက ၀ါးရင်းတုတ်သာ ကိုင်ထားသော ကြံဖွတ်များ ၊ စွမ်းအားရှင်ဆို သော ဂလေကချေများအား
၈၈ တုန်းကလို လျှို့ ဝှက် ပြောက်ကြား ဆုံး မ လက်စင် ပေး ကြပါ...
( ၈ ) ပြည်တွင်းက လှုပ်ရှားသူ များလည်း ပြည်ပ ကို ဘလောက်များ ၊ အီးမေးများ မှ တဆင့်အဆက် အသွယ်
မပြတ် ကြပါနှင့် .. အနည်းငယ်စီ အပြန်အလှန် ကူညီနိုင်က ကူညီ ကြပါ..
( ၉ ) ပြည်တွင်း က သတင်း တွေ ၊ အကြံညဏ်တွေ ၊ တောင်ဆိုမှူ အကူအညီတွေကို အဆက်မပြတ် လျှိဝှက်
အလေးထား ဆက်သွယ် ဖြည့် စည်း ပေးကြပါ..ပြည်ပက ဘယ်လောက်အော်နေအော်နေ ပြည်တွင်းကငြိမ်
သွားရင် ကမ္ဘာက ဂရုမစိုက်တော့ တဲ့ အပြင် စစ်အစိုး ရ က ပြည်သူတွေကို ချုပ်ကိုင်နိုင်သွားပြီ ပြည်သူတွေ
ကျေနပ် သွားကြပြီ ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုး ဖြစ်သွားနိုင်တယ် ၊ ပြည်သူသည် မီးဝေး ချိတ် ဖြစ်ရင် အေးစက် မာကျော
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 10:46 a.m. 1 comment: Links to this post
မလေးရှားရောက် မြန်မာ သံရုံး အတွင်းရေး
မလေးရှားနိုင်ငံ မြန်မာသံရုံး အတွင်း မသမာ စီးပွားရေးဈေးကွက်နှင့် စီးပွားရှာသူများ
မလေးရှားနိုင်ငံမှာ မြန်မာပြည်မှ တရားဝင်အလုပ်သမား မြောက်များစွာလာရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် လုပ်အားခ တစ်နေ့ရင်းဂစ် ၁၈ မှ ၂၀ သာရရှိပြီး Overtime အချိန်ပိုလုပ်အားခကို အဓိက အားထားနေရပြီး တစ်လကို ရင်းဂစ် ၉၀၀၊ ၁၀၀၀ လောက်ရလျှင် အတော်လေး အဆင်ပြေသော အလုပ်လို့ ပြောလို့ ရပါတယ်။ အဲဒီ ၉၀၀-၁၀၀၀ ထဲကမှ လဲဗီးကြေး တစ်လကို ၁၅၀-၂၀၀ လောက်နုတ်ရပါသေးတယ်။ ပြီးတော့ နေ့ စဉ်စားသောက်စရိတ် ချိုးခြံချွေတာစားမယ်ဆိုလျှင် တစ်လကို ၁၅၀-၂၀၀လောက်တော့ ကုန်ပါတယ်။
ဒါတောင် ဆေးလိပ်၊ ကွမ်းယာ၊ အခြေခံလိုအပ်သော ပစ္စည်းအသေးအမွှား ၀ယ်ယူစရိတ်၊ ခရီးသွားလာစရိတ် စသဖြင့် နုတ်လိုက်လျှင် တစ်လအသားတင် လစာမှာ ၅၀၀-၆၀၀ ၀န်းကျင်လောက်သာ ကျန်နိုင်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့ အဆင်မပြေသော အလုပ်သမားများဘ၀ကို မစာနာပဲ ခေါင်းပုံဖြတ် မသမာစီးပွားရှာနေသောသူများ မလေးရှားနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံးအတွင်း၌ ရှိနေကြောင်း သံရုံးအား လေ့လာစောင့်ကြည့်နေသူတစ်ဦးမှ သတင်းပေးပို့ ခဲ့ပါတယ်။ သံရုံးအတွင်း၌ဖြစ်ပေါ်နေသော မသမာစီးပွားရေးသမားတစ်စုမှာ မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကို သံရုံးကောင်တာ၌ သက်တမ်း တိုးမည်ဆိုလျှင် ပုံမှန်အားဖြင့် မနက်တင် ညနေလောက်မှ ရပြီး အဆိုပါ သံရုံးအတွင်း၌ မသမာစီးပွားရှာသူများ(ပွဲစားများ)ထံ၌ မိနစ် ၂၀ အတွင်း ရရှိနိုင်ပါတယ်။ သို့ သော် ထိုသူများအား တစ်ယောက်လျှင် ရင်းဂစ် ၅၀သာ ပိုပေးရပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ၀င်ငွေခွန် မပေးဆောင်ပဲ သက်တမ်းတိုးမည်ဆိုလျှင် ပွဲစားအား သက်တမ်းတိုးကြေး ရင်းဂစ် ၄၀၀ ပိုပေးလိုက်ရုံပါပဲ။
တရားဝင်သက်တမ်းတိုးကြေးမှာ ရင်းဂစ် ၆၀၀ဖြစ်၍ ပွဲစားကို ၄၀၀ ပိုပေးပြီး ရင်းဂစ် ၁၀၀၀ ဖြင့် ၀င်ငွေခွန်ဆောင်ရန်မလို သက်တမ်းတိုးပြီးသား စာအုပ်ကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ Passport စာအုပ်ပျောက်ဆုံးလို့ အသစ်ပြန်လျှောက်မည်ဆိုပါက ရင်းဂစ် ၁၅၀-၂၀၀ ပေးရပါမည်။ စာအုပ်ပျောက်ဆုံးလျှောက်ထားချိန်၌ နေထိုင်ရန် သံရုံးမှ ထောက်ခံစာထုတ်မည်ဆိုလျှင် တစ်ယောက်၊ တစ်စောင်လျှင် ၅၀ပေးရပါတယ်။ ထို့ အပြင် စာအုပ်စာမျက်နှာကုန်ဆုံး၍ စာအုပ်အသစ်လျှောက်လျှင် ၁ပတ်မှ ၂ပတ်အထိကြာမြင့်တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပွဲစားများထံတွင် နေ့ ချင်းပြီး ရရှိနိုင်၍ မလေးရင်းဂစ် ၇၀၀ တိတိ ပိုပေးရပါတယ်။
သာမန်အားဖြင့် စာအုပ်အသစ်တစ်အုပ်လျှင် ရင်းဂစ် ၁၂၀၀ ဟု သတ်မှတ်ထားသဖြင့် ပွဲစားများအား စာအုပ်အမြန်ရလိုသူများက ရင်းဂစ် ၁၉၀၀ ပေးလိုက်ခြင်းဖြင့် နေ့ တွင်းချင်း ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ထိုကဲ့သို့ ကိစ္စအ၀၀ မြောက်များစွာ အစုံအလင်ကို မလေးရှားရှိ မြန်မာသံရုံးကောင်တာတွင်တမျိုး အဆိုပါ ပွဲစားများတွင်တမျိုး နှစ်မျိုးဖြစ်နေရခြင်းမှာ ဘာကြောင့်ဖြစ်နေသလဲဆိုတာ လူတိုင်းတွေးဆကြည့်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ထိုကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်ပေးနေသော သူများ၏ အမည်များကို အတိအကျ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ထိုပွဲစားများမှာ သန်းနိုင်၊ မင်းအောင်၊ ထွန်းထွန်း၊ တင်အောင်မိုး၊ အောင်မြတ်၊ တင်စိုး၊ ထွန်းခိုင်တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်များမှာ သပုပ်လေလွင့် အပုတ်ချပြောဆိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ တိုက်ခိုက်ခြင်းမျိုး လုံးဝမဟုတ်ပါ။ အရုပ်ဆိုး အကျည်းတန်လှတဲ့ ကိစ္စများ သံရုံးကောင်တာအတွင်း၌ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကို သံရုံးအကြီးအကဲများ မသိနိုင်စရာ မရှိဟု ယုံကြည်ပါတယ်။ သံရုံးရောက်ဖူးသူတိုင်းလဲ သိကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ထိုပွဲစားများမှာ နေ့ စဉ်ကိစ္စအ၀၀ကို လာရောက်ဆောင်ရွက်ကြသူများနှင့် စကားမပြောခြင်လဲ အတင်းဝင်ရောပြောဆိုပြီး အလုပ်ကိစ္စများကို ဖျားရောင်းသွေးဆောင်ပြီး "ဆောင်ရွက်ပေးမယ်။ ဘယ်လောက်ကျမယ်။ သူတို့ ကိုမယုံလျှင် အမြဲလာခဲ့ပါ ဒီသံရုံးထဲမှာ အမြဲရှိတယ်"လို့ ပြောပါသေးတယ်။ ဘာကြောင့်များ စီးပွားရှာသူတွေကို ဒီလိုမြန်မာသံရုံးမှာ တွေ့ နေရတာ စဉ်းစားစရာပါ။ ထိုကိစ္စရပ်များနှင့် ဆက်စပ်မည် ထင်သော သတင်းတစ်ခုပါ သိစေချင်ပါတယ်။
မြန်မာအလုပ်သမားပေါင်း ၃၀၀ကျော် ရှိသော Outsourcing Company တခုမှာ အခြားသော Company များသို့ အလုပ်သမား အငှားချပေးထားသော အလုပ်သမားများထဲမှ စာအုပ်သက်တမ်းတိုးဖို့ လိုလျှင် အဆိုပါ Outsourcing Company မှ အလုပ်သမားများကို သံရုံးသို့ လိုက်စရာမလိုပဲ သံရုံးသို့ ပေးဆောင်ရမည့် တရားဝင်သက်တမ်းတိုးကြေးအပြင် ၀န်ဆောင်ခအတွက် ရင်းဂစ် ၃၀၀ လစာထဲမှ ဖြတ်တောက်ခြင်းခံရကြောင်းသိရပါတယ်။ ဘာကြောင့်အဖြတ်ခံရတာလဲ ရင်းဂစ် ၃၀၀ ကြီးများတောင်လို့ မေးတဲ့အခါ သံရုံးကောင်တာမှ လူမပါလျှင် ကိုယ်စားလာလုပ်လို့ မရဘူးလို့ မင်းတို့ သံရုံးက ပြောကြောင်း ဒါပေမဲ့ သူတို့ သံရုံးထဲမှာရှိသော ပွဲစားများနှင့် လုပ်လျှင်ရကြောင်း၊ ထိုပွဲစားကိုလဲ ပေးရကြောင်း၊ ကျန်တာက ကားခ၊ လာရောက်ဆောင်ရွက်ခ စုစုပေါင်း တစ်ယောက်ကို ရင်းဂစ် ၃၀၀ ပေးရကြောင်း ထိုကုပ္မဏီမှ လိုက်လံဆောင်ရွက်ပေးသူ မလေးတရုတ်က ပြောသွားပါတယ်ဟု သိရှိရပါတယ်။
ပြည်သူများ အကျိုးဆောင်ရွက်ရန် ဖွင့်လှစ်ထားသော သံရုံးအတွင်း၌ အဆင်မပြေလှသော ဘ၀များဖြင့်နေထိုင်နေရသော မြန်မာပြည်သားအလုပ်သမားများ အပေါ်၌ မသမာသောနည်းလမ်းများဖြင့် စီးပွားရှာနေသောသူများကို သံရုံးအတွင်းရှိ အကြီးအကဲများမည်သည့် အကြောင်းနှင့် မျက်စိစုံမှိတ်ငြိမ်နေကြပါသလဲ။ စဉ်းစားစရာ အလွန်ကောင်းလှပါတယ်။ အကြီးအကဲများကိုယ်တိုင် ဆောင်ရွက်လျှင် နာမည်ပျက်မှာ စိုး၍ ထိုပွဲစားများမှာ သံရုံးရှိအကြီးအကဲများ၏ ပြယုဂ်သာ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း။ ထို့ အပြင် သက်တမ်းတိုးလျှင် ၅၀၊ ပျောက်ဆုံးလျှင် ၁၅၀၊ စာအုပ်အမြန်ထုတ် ၅၀၀၊ အခွန်မဆောင်လိုလျှင် ၁၀၀၀ စသဖြင့် ဈေးနှုန်းများ အတိအကျရှိခြင်း၊ ပုံမှန်အားဖြင့် ရုံးအတွင်းတွင် ထိုကဲ့သို့ အတိအလင်း ဆောင်ရွက်နေခြင်းမှာ သံရုံးရှိ အကြီးအကဲများ မသိနိုင်စရာမရှိခြင်း၊ ၀န်ထမ်းများက အခြားသော ပွဲစားများ (ပြင်ပမှ) လာရောက်ဆောင်ရွက်ပေးလျှင် ပွဲစားလက်မခံဘူးဟု ပြောဆိုမောင်းထုတ်သော်လည်း ရုံးအတွင်းရှိ ပွဲစားများမှာ မည်သည့်ကိစ္စမဆို လွယ်ကူမြန်ဆန်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းများကို မလေးရှားနိုင်ငံ မြန်မာသံရုံးမှ အဖြစ်အပျက်မှန်များကို အများပြည်သူ သိရှိစေချင်တဲ့ ဆန္ဒအမှန်ဖြင့် သံရုံးသို့ တစေ့တစောင်းလေ့လာမိသူတစ်ဦးမှ အမှန်ကို ဖော်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။
မလေးရှားမြန်မာ သံရုံးအကြောင်းလေ့လာနေသူ တစ်ဦး (မလေးရှား)
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 9:30 p.m. No comments: Links to this post
Tetris Bloggers ဘလော့ အဖျက်သများများသို့ 
အဖျက်သမား ဘလော့ ဂါ များလော ..သို့ မဟုတ်.....
မေလ ၁၈ ရက်နေ့ က စ၍ တော်လှန်ရေး ဘလော့ များစွာတို့ ၏ စိဘောက်များ ( ဥပမာ ကို
ဖိုးတရုတ် ၊ ကနေဒါ မြန်မာ ၊ ရဲ ၀င့် သူ ၊ တာတာ့ စိတ်ကူး စသည် များ ) သို့မြန်မာ ဘ
လော င်္ဂဂါ ဟူ၍ ဖေါ်ပြပါ IP Address များ ကို အ သုံးပြု ကာ IP 61.19.65.245 နှင့် 
IP 61.19.65.92 ပေါ် တင် လိုက်လံ ဆဲရေး တိုင်းထွာ ရန်စ ခြင်းများ လုပ်လျှက်ရှိပါသည် ။
ထိုသူ များ၏ အဆင့် အတန်း နှင့် ဘယ်နိုင်ငံတွင် ဘယ်သို့ သော အလုပ်မျိုးများကို လုပ်ကိုင်
စားသောက်နေသည် ကို ကျွန်တော် မ
သိချင်ပါ ။ သူတို့ ၏ ဘလော့ စီဘောက်သို့ ကျွန်တော် လိုက် သွား၍ လွတ်လပ်စွာ ရေး သား
ပြောဆိုခွင့် ကို မနှောက်ယှက်ပါရန် ၊ မိမိယုံကြည်ရာ လမ်းကြောင်းကို မိမိဖါသာ သွား ကြ ပါ
ရန် သတိပေး ပါသော်လည်း နုတ်ကြမ်းတော့ အမိ ၊ ကိုယ်ကြမ်းတော့ အဖ ဆိုသည့် အတိုင်း
ပိုမို ရိုင်းပြစွာ လာရောက်ဆဲရေး တိုင်တာသည် အထိဖြစ်လာခဲ့ ပါသည် ။
ကျွန်တော် ၏ အချီန်ကို ထိုသူများအတွက် မပေးနိုင် သလို ၊ ကျွန်တော်တို့ ၏ တော်လှန် ရေး
အာရုံကို လည်း ထိုကြံ့ ဖွတ် ၊ စွမ်းအားရှင်စသည်တို့ နှင့် တန်းတူသော လက် ကိုင်တုတ် များ
ဆီသို့လမ်းကြောင်း မပြောင်းနိုင်ပါ ။ တော်လှန်ရေး မျက်ချေ ပြတ်ခံနိင်ပါ ။ ခွေးဟောင်တိုင်း
ထမကြည့် လိုသော်လည်း နောက်နောင် အိပ်ရေးမပျက်စေရန် သူတို့ ၏ IP Address များကို
ဘန်း လိုက်ပါ သည် ။ ကွန်ပြူ တာ ဘယ် နှစ်နေရာ သုံး၍ ထိုအကျိုးမရှိသည့် အောက် တန်း
ကျသည့် ၊ ပေါကြောင်ကြောင်နိုင်သည့် ၊ ယောင်္ကျားမဆန်သည့် ၊ သူရဲ ဘော ကြောင် သည့် 
အလုပ်မျိုးကို ဆက်လက်လုပ်ကြမည် မသိပါ ။
Gmail မှ ဖုန်း ထဲ မှ တိုက်ရိုက် စကားပြောရန် ဆွေးနွေးရန် စိန်ခေါ်ခြင်းကို လည်း သူတို့ မိမိ
ကို မိမိ ယုံကြည်ဟန် မတူပါ ။ ဤစာကိုသူတို့ ဖတ်နေသောအချိန်တွင်သူတို့ အချင်းချင်းကြား
၌ ရှက်နေကြမည် ၊ ဒေါကန်နေကြမည် ကို ကျွန်တော်ခန့် မှန်းမိပါသည် အရင်ကလည်း ဒီလို
ဟာမျိုး အခြား ဘလော့ များတွင် စီဘောက်များတွင် သူတို့ လုပ်ဘူးကြပါသည် ။ သူတို့ ကိုအ
ဖက်လုပ်၍ ဘယ် သူမှ မပြောသောအခါတွင် ငြိမ်ကျသွား ကြရာမှ ယခု ဒေါ် အောင်ဆန်း စု
ကြည် ကိစ္စပေါ်လာသောအခါ ထိုသူတို့ သွေး ရူးသွေးတန်းဖြစ်ကာ နေမထိထိုင်မသာ ဖြစ်ကာ
လုပ်မိလုပ်ရာ ကြံရာ မရ ပဲတွေ့ ရာသိရာ မိမိ နှင့် မှီရာ များ ထလုပ်ကြပြန်ပါသည်။ သို့ မဟုတ်
Attentions လိုချင်နေကြသူများလော ..။
သူတို့ IP Address များ အရ ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့Krung Thep Mahanakh ဒေ သ မှ
ဖြစ်ပြီး Longitute 100.5170 နှင့်Latitude 13.7500 အတွင်းရှိပြီး City ID 4815 ဇုန်မှဖြစ်ပါ
သည် အကယ်၍ Spam Relay နည်းဖြင့်IP address အတု မှ ထွက်လာသည်ဆိုလျှင်လည်း
California နှင့် New Jersey တို့ တွင်အခြေစိုက်သောInternational Email Abuse Agency
နှင့်Spy Service providing Network များသို့ လည်းသတင်း ပို့ ထားပြီး ဖြစ်ပါသည် အပြင်
အာရှဒေသဆိုင်ရာ ဆိုက်ပန် ကျွန်ပေါ် ရှိ ASNA စခန်း သို့ လည်း အီးမေးပို့ ထာပါသည်။
http://1001burmese.blogspot.com/ ထို ဖေါ်ပြပါ ၄င်းတို့ ၏ ဘလော တွင် ရေးချင်သူ
ဘာရေး ရေး ဖတ်ချင်သူများ ဘာဖတ်ဖတ်ကျွန်တော်တို့ စိတ်မ၀င်စား မနှောက်ရှက်လိုပါ ဘ
လော့ တခု စတင် တည်ဆောက်စဉ် ဘယ်လို စည်းကမ်းချက်များလိုက်နာရမည်ကိုထိုသူတို့
့နားမလည် ကြပြီလော၊ သူတို့ ၏ ဘလော့ အကြောင်း ကို NWA ဌါနချုပ်ကိုသတင်းပို့ သူ မ
ရှိသေးသည်လော တော့ မသိပါ။
International Email Account များ Blobs အကောင့် များ ဖွင့် ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ လိုက်နာ
ရမည့် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများကို ထိုသူတို့ သတိမပြုမိကြပြီလော မသိပါ ၊
ကျွန်တော်သည် မြန်မာခြင်း ဆွေးနွေးရန် ၀န် လေးသူ မဟုတ်ရပါ ၊ ကျွန်တော်သည် ဂျဏီ
ဗာ ကုလသမဂ္ဂ အစည်းအဝေးများတွင် ၄င်း ဂျာမဏီ NGOs ပွဲများတွင် ၄င်း မြန်မာအစိုးရ
အဆင့် မြင့် သန်တမန်များနှင့်ပင် တွေ့ ဆုံ စကားပြော ဆွေးနွေးခြင်းဉ် ပြည်ပရောက် မြန်
မာ အချင်းချင်း အေးဆေးဖေါ်ရွှေစွာ တွေ့ ဆုံနိုင်သည့် အပြင် ယနေ့ တိုင်လည်း က မေ ရိ
ကား ၊ အင်္ဂလန် တို့ မှ မိတ်ဆွေဟောင်း များထဲတွင် အမြင်မတူသူများ စွာ ရှိနေ ပြောဆို
ဆက်ဆံနေဆဲ လည်း ဖြစ်ပါသည် ။
သင်စိတ်ဆိုးပါသလားဟုမေးလာလျှင် ကျွန်တော်စိတ်မဆိုးပါ မိတ်ဆွေတိုးပွးရန်အလို့ ငှါ
ဖွင့် ထားပါသော ကျွန်တော်၏ စီဘောက်ထဲ သို့ သူတောင်းစား မှ အစ မအေ အထိအကြိမ်
ကြိမ် လာရောက်ဆဲသည်ကို ဖတ်ရသောအခါ ၊ ဆဲသူတို့ ၏ ဘလော့ ကိုပင် ဗျောင်ဖွင့် ထား
ပေသေးရာ အံ့ သြရပါသည် အင်း ငါ့ နဲ့ နော် ဘယ်လို လူတွေနဲ့ များလာတွေ့ နေရပါလိမ့် 
မြန်မာ အမျိုးသားခြင်းပဲ အယူအဆ အမြင် မတူစေဦးတော့ထိုသို့ ပြု၇န်မသင့်ပါ အကယ်
ပင် ယုံကြည်ချက်ပြင်းထန်သူများဖြစ်၍ ဆွေးနွေးလိုပါလျှင်လည်း Gmail ဖုန်း စသည်တို့ 
မှ ရိုးသား ရဲ ၀န့် စွာ ဆွေးနွေးနိုင်ကြသည်ပဲ ၊ ကျွန်နော့် အမြင် မှားနေပါ က ကိုယ်ပိုင်လေ
ယဉ်ပျံ ဘိုး အကုန်ခံ ကာ အလင်းပြန်ဝင်ရန် ၀န်မလေးပါ သင် တို့ အမြင်မှားနေပါက လည်း
အမြင်ဖလှည်ခြင်းအတွက် ဗဟုသုတ ရနိုင်ပါသည် ၊ မိမိ အမြင်ရုံးသွားသည့် တိုင် ထိုအယူ
အဆကို ဆက်လက် ဆုတ်ကိုင်လို က ဆက်လက်ဆုတ်ကိုင်ထားနိုင်ကြသးသည် ၊။
အဘယ်အကျိုးမျှ မရှိသော ၍ ကလေးဆန် သော လုပ်ရပ်မျိုးကို ဘာကြောင့် များ ဘာရည်
ရွယ်ချက်နှင့် အချိန်ကုန်ခံ ၍ ကြိုးစားပန်းစား လိုက်လံ လုပ်ဆောင်နေကြရပါသနည်းဟု
သာ သြ ချယုံ မှ တပါး ပုဂိုလ်ရေး အရ မသိသောသူများဖြစ်နေပါသဖြင့်စိတ်မဆိုးနိုင်ပါ။
ဒီမိုကရေစိနည်းလမ်းအရ လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်ရေး သားဖြန့် ဝေခြင်းကို ယုံကြည်ဝါသနာ
ပါသည့် အလျှောက် တွေ့ ဆုံဆွေးနွေး အဖြရှာရေး ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယဉ်တွဲ နေထိုင်ရေး ၊
တန်းတူ လေးစားအသိအမှတ်ပြုရေး စသည့်ငြိမ်းချမ်းရေး နည်းဗျူဟာများကို လက်
ကိုင်ထားသူဖြစ်ရကား ပြန်ဆဲရန် စဉ်းတောင် မစဉ်းစားမိပါ ။
ထို့ ကြောင် ယနေ့ ထို ဘလော့ ကာ ပိုင်သူ များသို့ ကျွန်တော်ပြောလိုသည်မှာ အကယ်ပင်
ရိုးသားစွာ ယုံကြည်ချက်ပြင်းထန်လျှင် ကွဲလွဲသော အမြင်များရှိပါစေ ယဉ်ကျေး ပြင်းထန်
စွာ ဆွေးနွေးကြရန် ကျွန်တော်တို့ ၏ Gmail များသို့ ၎င်း ဖုန်း မှတဆင့် ၎င်း ဆက်သွယ်
ရန် အထူးဖိတ်ခေါ်လိုပါသည် ။
ကနေဒါ မှ မြန်မာ တစု ..
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 12:50 a.m.2comments: Links to this post
We, Burma supporters and Burmese Canadians, are dismayed to see new charges against Burmese democracy leader and 1991 Nobel Peace Prize winner Daw Aung San Suu Kyi and the transfer of her and two caregivers to the notorious Insein Prison in Rangoon.
However, on May 13, she and her two female caretakers were detained after an American national allegedly swam across Inya Lake and stayed at her house for two days. Aung San Suu Kyi has been charged under the regime’s Law Safeguarding the State from the Dangers of Subversive Elements and is being held in Insein Prison. Her health has deteriorated tremendously, and due to the tight restrictions of her detention, she is often refused access to her doctor.
Her trial is scheduled for Monday, May 18. Two of Aung San Suu Kyi’s lawyers, were dismissed from the country’s bar by the Burmese military on Friday, May 15.
We appreciate the Government of Canada and the international community speaking out against this injustice. We call upon the government to take further strong action should the junta continue to detain her since she is an ‘Honorary Citizen of Canada.’
2) National League for Democracy (Canada Branch)
3) Canadian Friends of Burma
4) Canadian Campaign for Free Burma
5) Burmese Students’ Democratic Organization (Canada)
10) Kachin Canadian Association of Toronto Canada
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 10:53 a.m. No comments: Links to this post
Rally in Canada to demand Daw Aung San Suu Kyi Release
May 18th afternoon 1:30 pm, in Toronto Canada, two hundreds Burmese Canadian community including ethnic nationalities and Canadian supporter protest against detention of Daw Aung San Suu Kyi and demanded her immediate and unconditional release. It was held in front of Ontario Provincial Legislative Building in downtown Toronto.
Toronto area Member of Parliament and opposition party NDP leader Jack Layton, Dr. Brian John (Myanmar Coordinator Amnesty International), Michael Craig (Chair, China Rights Network) were among speakers at the protest and representatives of Tibetan Canadian also joined the protest.
The protesters also mention their appreciation to the Government of Canada and international community speaking out, and ask the Government of Canada to take stronger action should Burma's democracy leader and Honorary Canadian Citizen Aung San Suu Kyi is not released.
Similar protests were conducted in Ottawa and Vancouver as part ofaGlobal Day of action.
Global Action day - Rally in Toronto for Burma's democracy icon Aung San Suu Kyi
Canada News ( ကနေဒါ မြန်မာ သတင်း )
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 10:15 a.m. No comments: Links to this post
နိုင်ငံ တကာ ရှိ မြန်မာ သံ ရုံး များ သို့သတိ ပေး စာ များ ရောက် ရှိ ခြင်း
ပြည် တွင်း မှနေ ၍ နိုင်ငံ တကာ ရှိ မြန်မာ သံ ရှံး များ သို့အထူး သတိထားနေကြရန်
( ပေါက် ခ်ျ မှ တဆင့် ) အ သေးစိပ် လျှို ၀ှက် ညွန်ကြားချက်များ နှင့်တပ်လှန့် ထားကြောင်း ခိုင်လုံ သော သံတမန် သတင်း ရပ် ကွက်များ မှ တဆင့် သိရှိ ရသည် ။ အချို့ အရေး ကြီးသည့် ထိုင်း ၊ ဂျပန် ၊ အမေရိကား ၊ ကနေ ဒါ ၊ စသည့် နိုင်ငံများတွင် နေ့ ည မပြတ် အနည်း ဆုံး လူနှစ် ယောက် စီ ကင်း ကျ တာဝန် ယူ ခိုင်း ထား ပြီး နေပြည်တော် နှင် အမြဲ ဆက်သွယ် မှူ မပြတ်ရန် ညွန်ကြားထားသည် ။ သံတမန် မိသားစု ၀င် များ ဆွေမျိုး သားသမီးများကို ပါ ကင်း စောင့် ရန်နှင့်ကျောင်းသွားခြင်း ၊ ရုံး သွားခြင်း ၊ ဈေး သွားခြင်းတို့ တွင် ၊ ဒေသခံ ဒရိုင်ပါ တို့ မောင်း နှင် သော သံရှံး ၏ ကားဖြင့် သာ သွားလာရန်
ညွန်ကြားထားကြောင်း သိရသည် ။ သံရုံး သို့ ဖုန်းဆက်လျှင်လည်း မြည်သည့် မြန်မာ သံဝန်
ထမ်း ကမျှ မကိုင်ရန်နှင့်ဒေသခံ Receptionist များမှ သာ ဖုန်းတဆင့် ကိုင်ရန် နှင့်အင်
တာကွန်ဖြင့် မြန်မာ ၀န်ထမ်း များမှ နားဆင် ရန် နေပြည်တော် မှ ညွန်ကြားထားသည် ။
သံရှံး မှ စာရွက်စာတမ်းများကို အမိုက်ပုံး ထဲ သို့ မပြစ် ရန် ၊ စာရွက် ဖျက်စက် များ သံရှုံးတိုင်း
အသစ် ၀ယ်ထားရန် ၊ ဒေသ လုံ ချုံ ရေး Alarm Company များ Motions Sensors သုံး မီး လုံး များ ကင်မရာ ရုပ် ဖမ်း စက်များ တပ်ဆင်ထားရန် Budget ခွင့် ပြု ထားပြီးဖြစ်သည် ။
အချို့ နိုင်ငံများ ဂျပန် ၊ ထိုင်း စသည် တို့ တွင် ဒေသခံ ရဲ များကို နာရီ ပြည့် ငှါး ထားရန် ၊ အ
နောက်နိုင်ငံကြီးများတွင် တခါဘူးမျှ မငှါးဘူးသည် ဒေသခံ Security များ ငှါး ယန်းအသုံးပြု
ရန် ညွန်ကြားထားသည် ။ အထူး ညွန်ကြားချက် မှာ သံရုံး တိုင်း မိမိ တို့ ရောက်ရှိရာ နိုင်ငံ
တိုင်း ရှိ အာဆီ ယံ သံ ရုံး ၀န်ထမ်း များနှင့်မိမိတို့ အဆင့် ဆင့် အလိုက် အထူး ပိုမို မိတ်
ဆွေဖွဲ့ ထားရန် ( Lunch အတူ စားခြင်း ၊ လက်ဆောင်ပေးခြင်း ) ညွန်ကြားထားသည် ။
သံအမတ်ကြီး ၏နေအိမ်မှ ထမင်းချက် အမျိုး သမ္မီးများမှ အစ ဥယဉ် မှူး အဆုံး စနေ ၊ တ
နင်္ဂနွေ ထွက်လည် ခွင့် ကို ခေတ္တ ပိတ်ထားရန် စသည် တို့ ပါသည်..
ပြည်ပရှိ မိမိတို့ မိသားစုများထံ လိုက်လာရန် ၊ လည် ရန် အသင့် ဖြစ်နေသော ပြည်တွင်း ထဲ မှ သံတမန် မိသားစု ၊ ဆွေမျိုးစုများကို လည်း ယာယီထွက်ခွင့် ပိတ်ထားလိုက်သည် ။
ထို ထက်ပိုဆိုးသည် မှာ သံရုံး ၀န်ထမ်း အချင်း ချင်းကြားဉ် ပင် လျှင် အချင်း ချင်း အထူးသ
တိထားစောင့် ကြည့် ကြရန် ၊ အရေး ပေါ် အခြေအနေပေါ် အခွင့် ကောင်းယူ၍ နိုင်ငံ ရေး ခိုလုံ ခွင့် မျိုး ဖြင့် ထွက်မပြေး နိုင်စေရန် သံအမတ် ကို အထူး မှာကြားထားသည် ။ မည်သည့် မီဒီ
ယာနှင့် မျှ အင်တာဗျူး မလုပ်၇န် ၊ ဒေသဆိုင်ရာ နိုင်ငံခြားရေး ဌါန များ၊ ၀န်ထမ်းများကို အထူး
နည်းကပ်စွာဆက်ဆံရန် ( ဖါးထားရန် ) ညွန်ကြားထားသည် ။
နေပြီးစားပြီး US $ ၁၂၀၀ မှ ကျပ် ၄၀၀၀ ကျော်အထိရသော သံယုံးဝန်ထမ်းများကို လစာထပ်
မံတိုးပေးရန် အသံများလည်း ထွက်ပေါ် လျှက်ရှိသည် ။
ဘန်ကောက်သံရုံး အပိုင်စီး မှူမျိုး ကဲ့ သို့ ဖြစ်ပေါ် လာလျှင် အဘယ်သို့ အရေး ပေါ် လုပ်
ဆောင်ရမည် ကို လည်း သံအမတ်ကြီးကို လျှိုဝှက် သီးသန့် မှာကြားထားသည် …
သူတို့ ဘာကြောင့်ပြည်ပတွင် ဤသို့ ကြောက်နေကြရတာလဲ ?
ရေဘုရင် မိကျောင်းသည်ပင် ကုန်း ပေါ် သောင်ပြင်ပေါ် တွင် ဖွတ်ကဲသို့ပင်ဖြစ်ကြောင်း
( ကဗျာများblog မှ )
§ ဒေါ် စု ဟာ ငါတို့မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ အရေး တော်ပုံကြီးရဲ့ မီးရှူးတန်ဆောင်ပဲ …..
စစ်အစိုးရ လုပ်ရပ်ဟာ ငါတို့ အားလုံးကိုစိန်ခေါ်လိုက်တာပဲဖြစ်တယ် ၊ နိုင်ငံရေး အရ ဖြေရှင်း ခြင်း ၊ ငြိမ်း
ချမ်းရေး ၊ တွေ့ ဆုံ ဆွေးနွေးရေး ၊ ရင်ကြားစေ့ ရေး စတာတွေကို စစ်အစိုးရက ကျောခိုင်း နေကြောင်းထင်
ရှားစွာ ပြ သလိုက်တာပဲ ဖြစ်တယ်
သူတို့ ပြည်တွင်းထဲမှာ ငါတို့ ခေါင်းဆောင် တွေကို အနိုင် ကျင့် ရင် ငါ တို့ သူတွေဟာ ပြည်ပမှာ သူတို့ ရဲ့သံရုံးတွေ သားသမ္မီးတွေ ၊ အဆက်အသွယ် ယန္တယားတွေကို လက်စားချေ မှူတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်
ဂျော် နီ ပေါင်း မြောက်မြားစွာ နိုင်ငံ တကာ မှာ ပေါ် ပေါက်လာနိုင်တယ်
ပြည်တွင်းထဲ က ငါ တို့ ရဲ့ခံတပ် ကြီး ကျဆုံး ပြို လဲ သွားရင် ကမ္ဘာ နဲ့ အ၀ှမ်းမှာ
ပျောက်ကျား လှူပ် ရှား မှူတွေ ပေါ် ပေါက် လာနိုင်တယ်
ပြည်တွင်း မှာ လည်း မြို့တွင်း ပျောက်ကျားတွေ ပိုမို များပြားလာနိုင်တယ် .
စစ်အစိုး ရ ရဲ့ လုပ်ရပ် ဟာ ငါ တို့ အားလုံး ကို ကျားနာ တစ်ကောင်စိတ်ဓါတ် မျိုး
ဖြစ်သွားအောင် လမ်ကြောင်း ပြောင်းပေးလိုက်တာ ပဲ ဖြစ်တယ်
မိမိ နှင့် အနီး စပ် ဆုံး မှ စ၍ တော် လှန်ရေး ကို တိုးမြင့် လုပ်ဆောင် ကြ ဖို့လို ပြီ
ပုံသန်တန် ပြောင်း ကြဖို့ လို ပြီ ....
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 5:10 a.m. No comments: Links to this post
Who is Tay Za
Occupation Chairman, Htoo Trading
Tay Za (Burmese: တဇေ, also spelled Tayza or Teza) (born 18 July 1967) isaBurmese business tycoon, andaclose associate of the country's head, Than Shwe.
1 Business holdings
2 Relationship with the junta
His major business interests include Htoo Holdings and Air Bagan, the country's first and only fully privately-owned airline. In 2006/2007 Htoo Trading,adivision of Htoo Holdings involved in teak log exports, was Burma's top private exporter and fifth largest overall, with gross revenues of $65.1 million. His son, Thiha Zaw, recently bought the London Cigarette Company,alarge cigarette maker in Burma, and is believed to control the tobacco industry.
Other activities include construction, tourism, infrastructure projects, and mobile phone services. He maintains close relations with the military leadership -ason of key junta member General Thura Shwe Mann serves on the board of Htoo Trading, and his Myanmar Avia Export, Burma’s sole representative of Russia’s Export Military Industrial Group and of the Russian helicopter company Rostvertol,[ 4] was instrumental in the junta’s 2002 purchase of advanced MiG-29 fighters for US$130 million.[ 2]
Sean Turnell, an economics professor at Australia's Macquarie University who specializes in Myanmar, calls Tay Za "easily the most flamboyant of the tycoons that Burma has produced". According to Thailand-based opposition sources, he and former drug baron Lo Hsing Han paid for the $300,000 wedding of the daughter of Senior-General Than Shwe in 2006, and he is reported to be romantically involved with another daughter. Than Shwe's family frequently stay ataTay Za-owned resort at Ngwe Saung on Burma's northwest coast, and he is reported to act asabusiness agent for the family in Singapore.
Tay Za is reported to be in the process of establishing an art museum in Rangoon and is reported to be buying paintings by contemporary Burmese artists throughaUS citizen (to avoid US sanctions). The art museum will be on Kaba Aye Pagoda Road near Inya Lake in Rangoon.
In 2007, following protests against the junta on the streets of many cities in Burma, the United States government imposed sanctions against Tay Za and the companies he controls including Htoo Trading and Air Bagan.
^ Jay Solomon and James Hookway (2007-10-24) . "U.S. Focuses on Myanmar Tycoon". The Wall Street Journal. http://online. wsj.com/article/ SB11931666891716 8700.html?.
^ab c Money Men. The Irrawaddy. September 2008. http://www.irrawadd y.org/article. php?art_id= 14151.
^ Ye Lwin and Kyaw Thu (4-10 June 2007). Govt dominates foreign trade as gas sales pump up exports. The Myanmar Times. http://www.mmtimes. com/no369/ b004.htm.
^ab Wai Moe (2007-10-23) . "Tay Za Grounded". The Irrawaddy. http://www.irrawadd y.org/article. php?art_id= 9085.
^ Peter Beaumont and Alex Duval Smith (2007-10-7). "Drugs and astrology: how 'Bulldog' wields power". The Guardian. http://www.guardian .co.uk/world/ 2007/oct/ 07/burma. peterbeaumont.
^ "Tay Za: Junta links prove lucrative for Myanmar tycoon". The Strait Times.5May 2008. http://www.straitst imes.com/ print/Latest+ News/Asia/ STIStory_ 234209.html.
^ "Than Shwe Watch". The Irrawaddy. 2008-12-08. http://www.irrawadd y.org/article. php?art_id= 5597&page=6.
^ Cathy Scott-Clark and Adrian Levy (24 May 2008). "At home with the general". Mail and Guardian. http://www.mg. co.za/article/ 2008-05-24- at-home-with- the-general.
^ Tay Za, the Artful Dodger, The Irrawaddy, December 2008, pp. 11 ^ Executive Order: Blocking Property and Prohibiting Certain Transactions Related to Burma ^ "HP-807: Treasury Action Targets Financial Network of Burmese Tycoon and Regime Henchman Tay Za". US Department of Treasury. 2008-02-05. http://www.ustreas. gov/press/ releases/ hp807.htm.
Retrieved from "http://en.wikipedia .org/wiki/ Tay_Za"
62 Summerhill Avenue
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 1:18 a.m. No comments: Links to this post
ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေး
မြန်မာပြည်သားတိုင်း ပါဝင် အားပေးကြ ပါစို ...
ကမ္ဘာနှင့် အ၀ှန်း ဆန္ဒပြပွဲကို နိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိ မြို့ ကြီးများတွင် အချိန်ကိုက် ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါသဖြင့် 
ကနေဒါ နိုင် ငံ တိုရွန်တို မြို ရှိ မြန်မာပြည်ဖွားတိုင်း တခဲ နက် ပါဝင် အင်အား ပြကြပါ စို့.....
အချိန် = နေ့ လည် ၁ နာ ရီ ၃၀ မိနစ်
နေရာ = ပြည်နယ် ပါလီမန် အဆောက်အဦး ရှေ့ 
နေ့ ရက် = တနင်္လာ နေ့( မေလ ၁၈ ရက် )
ဒေါ် အောင်ဆန်း စု ကြည် လွတ်မြောက်ရေး
နိုင်ငံ ရေး အကျဉ်း သားများ လွတ်မြောက်ရေး
မြန်မာ ပြည်သူ ပြည်သားများ စစ်ဖိနပ်အောက်က လွတ်မြောက်ရေး...
တို့ အတွက် ပါဝင် ပူး ပေါင်း ကြပါ ...
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 12:37 a.m. No comments: Links to this post
( ၉ ရက် ၁၁ လ ၁၉၈၈ ခုနှစ် ထုတ် လုပ်သားပြည်သူ့ နေ့ စဉ် သတင်းစာ ဖြတ်ပိုင်း )
ဒီမိုကရက်တစ် လူငယ် ညီညွတ်ရေး အဖွဲ့ ချုပ် ကို ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် ရွေဂုံတိုင် အုတ်လမ်းတွင် စတင်၍ ကျောင်းသားလူငယ်များ ၊အနုပညာရှင်များ ၊ ၀ါရင့် နိုင်ငံ ရေး ခေါင်းဆောင် များဖြင့် ဖွဲ့ စည်း ခဲ့ ကြ စဉ်
ကပင် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် နှင့်NLD ပါတီကို ထောက်ခံ ပံ ပိုးပေးရေး ရည်ရွယ်ချက် အဓိက ဖြင့် 
NLD ၏ ၇ ပါတီ တပ်ပေါင်းစုတွင် ပါဝင် ခဲ့ ကြသော်လည်း အကြောင်း ကြောင်းကြောင့် အချို့ မှာပြည်ပ
သို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင် သွားခဲ့ ရခြင်း ၊ အချို့ မှာ လည်း စစ်အစိုးရ၏ စည်းယုံးဖျားရောင်းမှူအပေါ် နား
လည်မှူ ရယူကာလမ်းကြောင်း ပြောင်းလွဲ သွားခဲ့ ကြ သည့် အပြင် ၊ အချို့ မှာ လည်း ယုံကြည်ချက် ခံယူ
ချက် အမြင် သဘောထား ကွဲလွဲမှူများ ဖြင့် အဖွဲ့ နှင့် အဆက် အသွယ်ဖြတ်ကာနောက်ဆုံးတွင် စစ်အစိုး
ရ၏ ဖိအားပေးမှူ ၊ ဖျားယောင်း မှူ များ ကြား ပြည်တွင်းတွင် အဖွဲ့ ကို ဖျက်သိမ်း လိုက် ခဲ့ ကြရသည် ။
သို့ သော် လှေခွက်ကြီး ကျန် အလံ မလဲ စတမ်း ဆိုသည့် အတိုင်း ပြည်ပရောက် လူငယ် အချို့ မှ ဆက်
လက် ၍ ပါ တီဖျက်သိမ်းခြင်း ၊ စစ် စိုးရနှင့် အပေး အယူ လုပ် ခြင်း တို့ အ ပေါ် အဘောမတူပဲ အဝေး
ရောက် ပါတီကို မလေးရှား နှင့် ကနေဒါ တို့ မှ နေ၍လက်ဆင့် ကမ်း တာဝန်ယူ ထားခဲ့ ကြ သည် ။
သို့ သော် ပါတီနိုင်ငံရေး ဆန်လွန်းသော ၊ အမျိုးသား နိုင်ငံရေး ကို နောက်ချန်ထားသော ၊ အဖွဲ့ မဟုတ်
သည့် အပြင် ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် နှင့်NLD ပါတီ ကို ၄င်း ၊ ပြည်တွင်းပြည်မ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ 
အစည်း များ ၊ တော်လှန်ရေး အဖွဲ့ အစည်း များကို သော် ၄င်း နောက်တန်း မှ နေ၍ ပံ ပိုးလို သောအ
ဖွဲ့ အဖြစ် သာ ဆက်လက်ရပ်တည် နေကြ ပြီ ဖြစ်သည် ။
ယနေ့ NLD ပါတီ ၏ ရွေဂုံတိုင် ကြော်ငြာချက် အပေါ် မိမိတို့ အဖွဲ့ အနေနှင့် ထောက်ခံ ကြောင်း နှင့်
စတင် ဖွဲ့ စည်း စဉ် ကကဲ့သို့ ပင် ၇ ပါတီ တပ်ပေါင်း စု အဖြစ်နှင့် နောက်တန်းမှ ကြားကန်ပေးရန်အ
သင့် ရှိကြောင်း အောက်ပါ ကြော်ငြာ ချက်က ပြသလိုက်ခြင်းဖြစ်သည့် အပြင် ပြည်တွင်းပြည်ပ ရှိ အ
ခြား အဖွဲ့ အစည်း များနှင့် လည်း တသွေး တည်း ရှိပါကြောင်း ပြသလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
( အမြင် သဘောထား မတူ သော အဖွဲ့ ဝင် များ အခြင်း ခြင်း ပုဂ္လိုလ် ရေး အသေးစိပ် သ
ဘောထားကွဲလွဲ မှူများ ကို တင်ပြ ရေးသား ရန် မဟုတ်ပါ )
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 10:21 a.m. 1 comment: Links to this post
၀က်တုပ်ကွေး နှင့် ကနေဒါ မြန့် မာ ကွန်မြူနတီ
ကနေဒါ အစိုးရသည် ပြည်သူ့ အပေါ် လျို ၀ှက်သော ဖုံးဖိသော ထိမ်းချုပ် ထိန်ချန် အစိုးရမဟုတ်သလို ကနေဒါ
မီဒီယာများသည် လည်း ကြောက်လန့် နေရသော လွတ်လပ်စွာ အမှန်ကို မဖေါ် ထုတ် ရဲ သော အခြေအနေတွင်
မရှိကြသောကြောင့်အချီန်လွန်လျှင် သေစေနိုင်သော ၀က်တုပ်ကွေး ကဒ်ဆိုး ၏ အဖြစ်မှန် ကို နာရီ မိနှစ်မခြား
နည်းမျိုးစုံဖြင့် တင်ပြ သတိပေးလေ့ ရှိသည့် အပြင် လူမျိုးကြီး လူမျိုးငယ် မရွေး ဘာသာပေါင်းစုံဖြင့် လည်း အစိုး
ရကိုယ်တိုင်မှ ကြော်ငြာ ပေးလေ့ ရှိသည် အချိန်မလွန်ခင် ကာကွယ် တားဆီးစရာများ ပြင်ဆင်စရာများကို
ပြည်သူများဖက်မှ လုပ်ဆောင်နိုင်ပေသည် ။
မြန်မာအစိုးရ ၊ တရုပ်အစိုးရများကဲ သို့ သော ပြည်သူရွေးချယ်မထားသည့်အာဏာရှင် အစိုးရများသည် အဖြစ်
မှန်ကို ထိမ်းချုပ်ဖုံးဖိထားတပ်သည့် အပြင် လွတ်လပ်သော သတင်း မီဒီယာ စံနစ်ကို အားမပေးပဲ ၀ါဒဖြန့် ချီ မှိုင်း
တိုက် လှည့် စားသည့်အဆိပ်အတောက်မီဒီယာ စံနစ်မျိုးကိုသာ အသုံးပြုသည့် အတွက် တိုင်းပြည်အတွက်ရော
ကမ္ဘာ့ပြည်သူများအတွက်ပါ မယုံကြည် မစိတ်ချရသည့်လက်လွန်သည့် အဖြစ်မျိုး များစွာ တွေ့ ရတပ်ကြရ
သည် မှာ ၁၉၉၂ ခု နှစ် တရုပ်ပြည်မှ စတင် သော ဆား SARS ရောဂါဆိုးကြီး ကမ္ဘာကို ပြန့် ပွားပုံ ၊ ငှက် တုပ်
ကွေးရော ဂါ နှင့်မြန်မာ AIDS ရောဂါ ၊ မြောက်ကိုရီးယား ၏ ဒုံးကျဉ် ပြနာ စသည့် သာတကများက သက်သေ
ဘာကြောင့်ယနေ့ ကမ္ဘာကြီးပေါ်တွင် ပြည်သူ ရွေးချယ်သောအစိုးရအုပ်ချုပ်သည့် နိုင်ငံများနှင့် ပြည်သူ မ
ရွေးချယ်ခဲ့ ပါပဲ အာဏာရှင်ဆန်ဆန် အုပ်ချုပ်နေသော နိုင်ငံများ ကွာခြားနေကြရပါသလဲ ...
ဘာတွေကွာခြားပါသလဲ ၊ ထိုနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းရေး အပြင် ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံ အသီးသီးရှိပြည်သူများကိုပါ ထိခိုက်
အန္ထရယ်ပြု ချိမ်းခြောက်လာနိုင်ပါသလော ၊ အဖိနိပ်ခံပြည်သူများ၏ အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်များအတွက်အ
ဘယ်မျှ စိုးရိပ်စရာကောင်းပါသလဲ ၊ ထိုးထွင်းမြင်နိုင်စွမ်းရှိသောပြည်သူများ နှင့် အတ္တနည်းပါးသော ပြည်သူ
များအနေနှင့်ခေါင်းငုံ့ ငြိမ်ခံနေသင့် ပါသလော ၊ လူ့ အခွင့် အရေး နှင့် လွပ်လပ်ခွင့် ကို လေးစား ခံစားနေ
ကြရသော အခြားနိုင်ငံများမှ လူသားများအနေနှင့်ငါတို့ ပြည်တွင်းရေး မဟုတ်ဟု မျက်စေ့ မိတ်နားပိတ်
နေသင့် ပါသလော ..စသည့် စသည့် မေးခွန်းများစွာကို စစ်အုပ်စုများ မှ အစ သာမန် ပြည်သူများအလည်
တိုက်ပွဲဝင် လတ်မြောက်ရေး လိုလားသူများအဆုံး မိမိဖာသာ ဖြေကြည့် လျှင် တူညီသောအဖြများကို ရ
တင်ပြသူ Canada Myanmar Group at 10:56 a.m. No comments: Links to this post
နိုင်ငံ တကာ ရှိ မြန်မာ သံ ရုံး များ သို့သတိ ပေး ...
Rally in Canada to demand Daw Aung San Suu Kyi Rel...
Joint Statement of Friends of Burma and Burmese de...